सिंहदरवारभित्र खैनी–चुरोट बोकेर जान निषेध::त्रिशुलीखवर
गेटमै खानतलासी, फेला परे कारवाही
काठमाडौं, चैत १३ । निजी वा संस्थागत काम लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र साथमा सुर्तीजन्य पदार्थ छ भने तपाईंलाई सुरक्षाकर्मीले गेटमै रोक्नेछन्। खल्तीमा बोकेका सुर्तीजन्य पदार्थ फालेपछि मात्रै सुरक्षाकर्मीले तपार्इंलाई मन्त्रालय प्रवेशको अनुमति दिनेछन् । मन्त्रालय परिसरमा सुर्तीचुरोट खाएको पाइएमा त जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यो खवर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले कानुन बने पनि व्यवहारमा खुलेआम यस्ता पदार्थको प्रयोग नघटेपछि मन्त्रालयबाटै कानुन कार्यान्वयन गर्न लागेको बताइन्। ‘कानुनले मात्रै भएन, व्यवहारमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थले हानि गर्छ भन्ने आत्मबोध हुनुपयो,’ अर्यालले भनिन्।
ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको खोल, एवं ¥यापर्समा तोकिएको भागमा चेतावनीमूलक सन्देशयुक्त चित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल उत्पादक कम्पनीले ७५ प्रतिशत भागमा यस्तो चित्र राख्दै आएका छन्। यस्तो सन्देश ९० प्रतिशत भागमा राख्नुपर्ने गरी निर्देशिका संशोधन भइसकेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न बेग्लै अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि लागू हुन सकेको छैन।
मन्त्री अर्यालले कानुनी सचेतना बढाउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि आफूले ठोस काम गर्ने बताइन्।
धूमपानमा निकोटिन, टार, कार्बनमनोअक्साइड, लिड, नाइट्रोसोमाइन जस्ता क्यान्सरजन्य चार हजारभन्दा बढी प्रकारका हानिकारक रासायनिक पदार्थ हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले क्यान्सर, मुटुरोग, दमखोकीजस्ता २५ भन्दा बढी प्रकारका रोग निम्त्याउँछ। श्वास–प्रश्वास प्रणालीमा इरिटेसन गराएर दमको समस्या हुने कारण पनि धूमपान नै हो। चिकित्सकका अनुसार एक खिल्ली चुरोटमा २० मिलिग्राम निकोटिन हुन्छ।
धूमपानले शरीरका मसिना जिन एवं क्रोमोजोमलाई नष्ट गर्छ। त्यसपछि मानिसलाई क्यान्सर हुन सक्छ । धूम्रपानले नसाको बीचमा बोसो जम्मा गराउँछ। त्यसपछि नसा साँघुरो भई रक्त सञ्चारमा अवरोध उत्पन्न भई हृदयाघात गराउने चिकित्सकहरु बताउँछन्। त्यसैगरी गर्भवती महिलाले धूमपान गरेमा बच्चाको विकासक्रममा अवरोध आएर महिना नपुग्दै जन्मिने, कम तौलको जन्मिने जस्ता समस्या गराउँछ।
आफ्ना माग पूरा नभए डा. केसी २ पुसदेखि आमरण अनसन बस्ने
१६ औँ सत्याग्रहको घोषणा गर्दै डा. केसी